के गर्दै छ सरकार ?- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
असार २८, २०७६ सुशील पौडेल
देश गणतन्त्रमा आएसँगै धेरै क्षेत्रमा कानुन र काम गर्ने शैली परिवर्तन भए  । हुँदै छन्  ।
स्वदेशी फिल्म क्षेत्र भने अझै पनि पञ्चायती व्यवस्थामा नै अड्किएको छ । २०२६ सालकै चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनमा टेकेर गणतान्त्रिक राज्यले फिल्म क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको छ । फिल्मकर्मीबाट राज्यको फिल्म क्षेत्रप्रतिको नीति समयसापेक्ष हुनुपर्ने माग बढ्न थालेपछि २०७० मै यादव खरेलको संयोजकत्वमा चलचित्र नीतिको एउटा खाका बनिसकेको छ । त्यही बनेको छ वर्ष बितिसकेको छ, ऐनका रूपमा आउन सकेको छैन ।
खरेल संयोजकत्वको समितिले फिल्म क्षेत्रलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा मात्रै नहेरी रोजगारमूलक सिर्जनशील सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्न राज्यलाई सुझावसमेत दिएको छ । नयाँ चलचित्र ऐनको तयारीमा जुटिरहेको सरकारको रवैया भने यतिबेला अन्योलग्रस्त देखिन्छ । भारतीय फिल्म अवार्ड आइफाको आयोजक नै बनेर ठूलो रकम खर्चन तयारी अवस्थामा देखिएपछि सरकारको चर्को विरोध मात्रै भएन, यसले राज्यको स्वदेशी र विदेशी फिल्मप्रतिको हेराइमा समेत तुलना भयो । भारतीय फिल्मका लागि हुन लागेको एकदिने अवार्डका लागि पाँच मिलियन डलरको प्रस्तावमा बार्गेनिङ गरी चार मिलियन डलर दिएर उसैका पाहुनालाई आतेजाते हवाई खर्चदेखि यहाँ बसुन्जेलको रसदपानीसमेत बेहोर्न झन्डै झन्डै तयार भएको (प्रधानमन्त्री त अझै पनि गराएरै छोड्ने वक्तव्य दिइरहेका छन्) सरकारले समग्र स्वदेशी फिल्म क्षेत्रका लागि कति लगानी गर्दै आएको छ त ? नतिजा शून्यप्रायः छ ।
फिल्म क्षेत्रलाई हेर्ने एक मात्र निकाय चलचित्र विकास बोर्ड पनि विदेशी फिल्मको लेबीबाट जेनतेन चलेको छ । दोलखामा बनाइने भनिएको फिल्म सिटी अर्थ अभावमा माटो सम्याउने कामसमेत हुन नसकेको वर्षौं भयो । प्रम केपी ओलीले भने उल्टै दोलखामा फिल्म सिटी उपयुक्त नभएको भन्दै गोरखाको पालुङटारदेखि धादिङको सल्यानटारसम्मको क्षेत्रमा फिल्म सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भारतीय टोली नै गुहारे । एस्सेल ग्रुप प्रमुख तथा जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्राइजेज अध्यक्ष सुवास चन्द्रादेखि भारतीय राज्यसभा सदस्य अमर सिंह र कलाकार जया प्रदाको ‘होलिडे टुर’ ले दिएको सुझाव के भयो ? कता पुग्यो ? अत्तोपत्तो छैन । अहिले दोलखाको काम नै अघि बढ्न सकिरहेको छ, न उनैले उपयुक्त ठानेको गोरखा, धादिङको मर्स्याङ्दी नदी बेल्ट नै ।
देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र छायांकन गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई चिनाउन आइफा अवार्ड उपयुक्त कार्यक्रम हुने ठान्ने सरकार आफ्नै फिल्मलाई कसरी स्तरीय बनाएर विदेशी दर्शकमाझ पुर्‍याउने र यहाँ आकर्षित गर्ने भन्ने अर्को बाटोचाहिँ देख्दैन । न फिल्मसम्बन्धी अध्ययनशाला खोलेर दक्ष फिल्मकर्मी निर्माणमा नै अग्रसर देखिन्छ । अरू त अरू, फिल्मसम्बन्धी अवार्ड, महोत्सव वा कार्यशाला गर्नुपर्छ भन्नेसमेत सरकार ठान्दैन ।
गत साता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नयाँ पासा फाले— विदेशी फिल्मको नेपाल प्रदर्शनलाई कोटा प्रणालीमा नियमन गर्ने भनेर । उनले हालै प्रत्येक फिल्महलले कम्तीमा १ सय ८० दिन स्वदेशी फिल्म मात्रै चलाउनुपर्ने अन्यथा हलमा ताला लाग्ने भनेर बहस छेडे । त्यसो त यादव खरेल संयोजकत्वको समितिले पनि स्वदेशी फिल्म प्रवर्द्धन गर्नका लागि सकारात्मक विभेदको नीति लिँदै कोटा प्रणाली लगाएर मात्रै यहाँ चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यतिबेला उक्त नीतिलाई टेकेर १ सय ५० दिनको कोटा लागू गर्ने गरी ऐन ड्राफ्ट भइरहेको बुझिन्छ । स्वदेशी फिल्मको संरक्षणका लागि अन्य देशमा पनि कोटा प्रणाली लागू गरिएका उदाहरण छन् । दक्षिण कोरियाको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ । हलिउड फिल्मको सेपमा परेको कोरियन फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न त्यहाँको सरकारले स्वदेशका हलले वर्षमा एउटा मात्रै विदेशी फिल्म लगाउन पाउने नियम ल्यायो । त्यसपछि कोरियन फिल्मले बिस्तारै दर्शक बटुल्दै जान थालेपछि विदेशी फिल्मका लागि लगाइएको कोटा खुकुलो पारिँदै लगिएको थियो । तर, कोरियन सरकारले स्वदेशी फिल्मका लागि बजार निर्माण गरिरहँदा स्वदेशी फिल्म निर्माणका लागि पनि प्रोत्साहनजन्य थुप्रै काम गरेको थियो । स्वदेशी फिल्म र फिल्ममेकरमाथि सरकारले लगानी गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको आयोजना पनि सरकारले गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको छ ।
फिल्म नीतिमा समेत बौद्धिक, कलात्मक, मौलिक तथा यथार्थपरक फिल्म निर्माणमा प्रोत्साहनका लागि चलचित्र लगानी कोष बनाई त्यसबाट ऋण उपलब्ध गराउन सकिने, फिल्म छायांकन तथा प्रशोधनका लागि फिल्म सिटी निर्माण, दीर्घकालीन रूपमा फिल्म क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने उच्च जनशक्ति उत्पादनका लागि सिर्जना क्षेत्रका अन्य विभागहरू पनि अटाउने गरी सिर्जनात्मक कला विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने, पारदर्शी बक्सअफिस प्रणाली लागू हुनुपर्ने, हलहरूको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, नेपालीहरूको बसोबास धेरै रहेका विदेशी भूमिमा अवार्ड र महोत्सवहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका बुँदाहरू समेटिएको छ ।
अझै बक्सअफिसलाई पूर्ण रूपमा लगाउन नसकिरहेको सरकारले यी यावत् कुराहरूमा कहिले पाइला चाल्छ र स्वदेशी फिल्म क्षेत्रलाई साँच्चै बलियो र विदेशी फिल्मलाई छेकबार लगाउँदा पनि यहाँका दर्शकलाई फिल्मको स्वादमा कमी आउन नदिनेतर्फ पहल गर्ला ? कुनै निश्चित अवधिसम्म स्वदेशी फिल्म चलाउनैपर्ने नियम लगाएर मात्र चाहिँ पुग्दैन । फिल्मकै स्तरवृद्धिमा पनि सरकारले विभिन्न ढंगले लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको आयोजना, गतिलो सुटिङ स्टुडियो, एकेडेमी र छात्रवृत्ति, लगानी कोष, सहुलियत ऋणलगायतका क्षेत्रमा सरकारले फिल्ममेकरलाई सहयोग गर्न सक्छ ।
असार २८, २०७६ विनय शेखर
त्यो साइकल किन भनिरहेको छु भने त्यो मेरो काठमाडौंको पहिलो साइकल थियो । जीवनको पहिलो माउन्टेन बाइक थियो । त्यो साइकल आजभन्दा २१ वर्षअगाडि गोस्वारा हुलाक कार्यालय परिसर सुन्धाराबाट निमेषभरमै हराएको थियो । साइकल हराउँदा म नराम्ररी प्रताडिएको थिएँ । डराएको थिएँ । मैले पहिलोपल्ट सबभन्दा ठूलो झूट बोलेको थिएँ । मैले बोलेको त्यो झूटले जितेको थियो ।
त्यो साइकलले मलाई सञ्चारकर्मी बनायो । जुन साइकल चढेर मैले टंकेश्वर कालीमाटीको एउटा मादलेको बारेमा रेडियो रिपोर्ट बनाएको थिएँ । मेरो जीवनको पहिलो रेडियो रिपोर्ट थियो, त्यो जुन दिन म रेडियोमा बोलेको थिएँ । मैले त्यो बेलाको चर्चित रेडियो कार्यक्रम खोजखबरका मार्फत रेडियो रिपोटिङका क–ख त्यही साइकलमा ओहोरदोहोर गर्दै सिकेको थिएँ ।
खोजखबर सुनेर धनकुटाकी ७२ वर्षीया आमा (जसको नाम बिर्सें अहिले) ले ‘खोजखबर सुनाउनुभएकोमा धन्यवाद’ भनेकी थिइन् । धनुषाको मधुवासा भन्ने गाउँका इन्द्रबहादुर क्याप्छाकीको कथा रेडियोमा सुनेपछि त्यो कथा ल्याउने मलाई रेडियो नेपालका सुदीप ठाकुरले सधैं क्याप्छाकी भन्न थाले । अर्घाखाँचीका चुरौटेहरूको कथा संकलन गरेर गुल्मी पुग्दा तत्कालीन जिल्ला सभापतिले ‘त्यो रातो किताबमा भएको बजेट रेडियोबाट नभन्दिनू न जनताले मार्नै लागे’ भनेर दुखेसो पोखेका थिएँ । त्यो साइकल हराएपछि मेरो मनमा यस्ता कैयौं घटना ताजा भएर आए जसले मलाई एकैचोटि गहिरो पीडामा पुर्‍याएका थिए । साइकल हराएकोमा कारबाही हुन सक्थ्यो । कारबाहीस्वरूप म रेडियो कार्यक्रम खोजखबरबाट बाहिरिन सक्थें । त्यसैले म डर र पीडाले निथ्रुक्क भिजेर सुन्धारादेखि बागबजार फर्किंदै थिएँ ।
खोजखबर त्यो बेलाको नौलो रेडियो कार्यक्रम थियो । नौलो यस अर्थमा रेडियो नेपालमा त्यसअघि खोजखबरजस्तो कुनै कार्यक्रम थिएन । रेडियो नेपालले शासकका कुरा मात्र सुनाउँथ्यो । खोजखबरमा भने मान्छेका कथा बज्थे । शासक र मान्छेमा अहिले त फरक छ भने २१ वर्षअगाडिको कुरा अर्कै थियो ।
खोजखबर रेडियो कार्यक्रम र मेरो त्यो साइकलबीचमा गाढा नाता थियो । संवाददाता हुनुअगाडि खोजखबर कार्यक्रम उत्पादन समूहको म सहयोगी थिएँ । सहयोगीको रूपमा मेरो मुख्य र दैनिक काम बागबजारबाट गोस्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धारा पुग्नु, पोस्ट बक्स नम्बर खोल्नु र त्यहाँ भएको चिठी बोकेर फेरि बागबजार आउनु थियो । खोजखबरका लागि दैनिक सयौं चिठी आउँथे । ती चिठीमा आम मान्छेका विषय हुन्थे । रातो किताबमा कुन परियोजना पर्‍यो ? परियोजनाका लागि कति बजेट पर्‍यो ? र त्यो परियोजना कसलाई र कहाँ पर्‍यो भन्ने जानकारी खोजखबरमा सुन्नथालेपछि आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि कति बजेट पर्‍यो भन्नेमा आम मान्छेको बढी चासो पाइन्थ्यो । म त्यो साइकलमा तिनै आम मान्छेका चासो र सरोकार बोकेर, तिनको उचित जवाफ जिम्मेवार निकायबाट खोज्ने काम गर्थे जुन खोजखबर कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ थियो । साइकलले मलाई त्यो काम गर्न सजिलो बनाएको थियो ।
साइकल त हराई नि हाल्यो । अब के गर्ने ? कसरी हरायो भन्ने ? साइकल नहराओस् भनेर भीमसेन दाइले साइकलसँगै गतिलो चाबी पनि किन्दिएका थिएँ । साइकल किन्न भनेर एक दिन भीमसेन राजवाहक दाइले मलाई असन लिएर गए । नयाँ साइकल पाउँदा को दंग हुँदैन । मेरो खुसीको सीमा थिएन । मैले त्यो साइकलमा बागबजार सुन्धारा मात्र हैन, बिजुलीबजारको डेराबाट अफिस आउजाउ गर्न पनि पाउने भएँ । बागबजारबाट साँझ रेडियो नेपालको स्टुडियो सिंहदरबार जाने । सिंहदरबारबाट बिजुलीबजारको डेरामा जाने र फेरि बागबजार फर्किने । साइकलले मेरो दैनिकी सहज बनाएको थियो । मेरो दैनिकी सहज हुँदा खोजखबरका अग्रजहरूलाई सजिलो हुने नै भयो । कार्यालय सहयोगीदेखि संवाददाताको काम गर्न म राजी थिएँ भने अग्रजहरू धेरै काम गराउन पाउँदा दंग नहुने कुरै भएन । मेरा लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के थियो भने त्यो साइकल मेरो जीवनको पहिलो माउन्टेन बाइक थियो । जसलाई उबेला निकै सस्तोमा किनिएको थियो । बिजुलीबजारबाट मैतीदेवी डेरा सरेपछि पनि त्यो साइकल मेरो अभिन्न मित्र थियो ।
मेरो पहिलो साइकल अनुभव नमीठो छ । म भोजपुरको दुर्गम गाउँमा जन्मेको एक खाँटी पहाडे बाहुन । एसएलसीपछि इटहरीमा क्याम्पस पढ्ने पारिवारिक योजनाअनुसार म इटहरी आएँ । मेरो भोजपुरे छिमेकी र लगौटिया यार मभन्दा एक–दुई वर्षअगाडि नै इटहरी आएको थियो । ऊसँग साइकल थियो । एक दिन साइकल लिएर ऊ मेरो मामाको पसलमा आयो । म मामाघर बसेर पढ्न सुरु गरेको थिएँ । र, हामी इटहरीपारि मोरङको बाँसबारीमा घर बनाउँदै थियौं । त्यही यार र उसको हिरो साइकल चढेर बन्दै गरेको घर हेर्न बाँसबारी जाँदा बुढीखोलामा हामी गम्भीर दुर्घटनामा पर्‍यौं । होस आउँदा म वीर अस्पतालमा थिएँ । साथीको अत्तोपत्तो थिएन ।
हाम्रो साइकललाई बालुवा बोकेको ट्रकले हानेको थियो । निको भएपछि गाउँघर पुग्दा दुर्घटना भएको देख्नेहरू भन्थे, ‘तँलाई त त्यो ट्रकले ब्याक गरेर मार्न लागेको थियो तर हामीले गर्दा बाँचिस् ।’ त्यो दुर्घटनामा मेरो टाउको फुट्यो । साथीको खुट्टा भाँचियो । र पनि हामी बाँच्यौं । यदि त्यस दिन नबाँचेको भए आज साइकलकै कथा यसरी लेखिन्नथ्यो ।
दुर्घटनापछि तङ्ग्रिन समय लाग्यो । म जनता क्याम्पस इटहरीमा आइकम पढ्न थालेको थिएँ । उपचारपछि फर्केर म बिस्तारै साइकलको पछाडि बसेर मामाको छोरासँगै क्याम्पस जान थाले । त्यो हिरो साइकल थियो । एक दिन मामाको छोराले साइकल सिकाउन मलाई बुढीखोला किनारमा लगे । सिक्नु त कता हो कता, त्यो दिन म लडेर घाइते भएँ । चेनले हो वा केले हो, खुट्टामा चोट लाग्यो । केही दिनमा अलिकति कुदाउन सक्ने भएँ । साँझको समय इटहरी यातायात कार्यालयअगाडिको मामाघर फर्किंदै थिएँ । एक जना महिला अगाडि परिन् । मैले साइकल रोक्न सकिनँ । महिला र साइकल ठोक्किए । महिला चिच्याउँदै लडिन् । धन्न मचाहिँ लडिनँ र कुटाइ खानबाट जोगिएँ । त्यसपछि केही दिन साइकल चलाउने आँट आएन ।
मेरो बस्ने अड्डा बदलियो । इटहरीबाट बुढीखोलापारि आफ्नै घरमा सरेपछि आफूसँग साइकल नहुँदाको अप्ठेरो खड्कियो । ङिच्च हाँस्दै याचना गरेपछि वरपरबाट कलेज जाने दाइ–दिदीले लिफ्ट दिन थाले । सबभन्दा धेरै पटक आफूभन्दा सिनियर दिदीको पछाडि बसेर कलेज गएँ । एक दिन दिदीका दाजुले देखेछन् । भोलिपल्टदेखि दिदीले लिफ्ट दिन छोडिन् । घर आसपास गाडी नरोक्ने हुनाले त्यसपछि पैदलयात्राबाटै घर–कलेज आवत–जावत भयो ।
एक दिन आमाले साइकल किन्न पैसा दिनुभयो । आमाले दिएको पन्ध्र सय रुपैयाँ बोकेर विराटनगर गएँ । विराटनगरबाट माइलो दाइ र म जोगबनी गयौं । पन्ध्र सयसम्ममा आउने साइकल खुबै खोज्यौं । महिलाले समेत सजिलै चलाउन मिल्ने डिजाइनको साइकलचाहिँ अलि सस्तो पाइने रहेछ । तर १६ सय चाहिने भयो । दाइले एक सय थपेर साइकल किन्ने निर्णयमा पुग्यौं ।
किन्न त किनियो । तर भन्सार कसरी कटाउने ? भन्सार तिर्ने पैसा थिएन । जोगबनीमा रेलस्टेसनको आसपास निकै फोहोर र हिलो थियो । दाइ साइकल कुदाउँदै रेल स्टेसनतिर गएपछि म लुरुलुरु फर्किएँ । १५ मिनेटपछि धूलाम्य र हिलाम्य साइकल लिएर दाइ सकुशल नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि एकाएक खुसीले मेरो अनुहार उज्यालियो । मभन्दा धेरै खुसी दाइको अनुहारमा देखियो । दाइले नयाँ साइकललाई पुरानोजस्तो बनाएर भन्सार कटाउँदा कसैले सोधेन । कतैबाट रोकावट भएन । हामीले भन्सार छलेर देशलाई घाटा पुर्‍याएका त थियौं तर त्यसो गर्दा ठूलै लडाइँ जितेर फर्केको सिपाहीको जस्तो छाती फुलेको थियो दुवैको ।
मलाई त्यो साइकलले हिउँद र बर्खा नभनीकन वर्षौंसम्म खुसीसाथ बोक्यो । आईकमको नतिजा आउने बेलामा त्यो साइकल छोडेर म काठमाडौं आएपछि ऊ र म सदाका लागि विछडियौं । अनि मेरो जीवनमा आयो त्यही साइकल जुन माथि पनि भनिसकेको छु, २१ वर्षअगाडि सुन्धाराबाट हरायो ।
त्यो साइकल हराएको पीडाले रन्थनिदै अफिस पुग्दा सबै जना आइसक्नुभएको थियो । कसै गर्दा पनि साइकल हरायो भन्ने हिम्मत जुटाउन सकिनँ । दिन ढल्कियो । त्यो दिन रेडियो नेपाल जानुपर्ने थिएन । घर जाने बेला भयो । म सदाझै घर जान भनेर एकतला ओर्लिए जहाँ साइकल राखिन्थ्यो । साइकल राखेको ठाउँ हेरें । केही नदेख्दा झन् बैराग लाग्यो । एकातिर दुःख अर्कोतिर डर । हराएको कुरा कहिलेसम्म लुकाउने ?
खै के सम्झें कुन्नि, म कुद्दै माथि चढें । भर्‍याङमा दौडँदा चर्कै स्याँस्याँ भयो । आत्तिँदै फर्केको देखेर त्यहाँ भएका जति अग्रजहरू चकित भए । भीमसेन दाइले सोधे, ‘के भयो ?’ मैले सास अड्किँदै भने, ‘साइकल त तल छैन राखेको ठाउँमा ।’ अनि दाइ र म दौडँदै साइकल राख्ने ठाउँमा आयौं । हुलाकबाट आएपछि यही राखेको हो, अघि खाजा खाने बेलासम्म पनि थियो भनेर मैले बेलिविस्तार लगाएँ । मैले यो सबै कुरा यति विश्वासका साथ भनें कि दाइले थोरै शंकासमेत गर्न सकेनन् । मैले नराम्ररी ढाँटें । मेरो ढँटाइ सत्य ठहरियो । सुन्धाराबाट हराएको साइकल बागबजारबाट हरायो भन्ने प्रमाणित गरेपछि मन नहाँसे पनि अनुहार हल्का उजालियो । म आफ्नै नजरमा ढँटुवा भएँ । त्यो मेरो मनको डरले खडा गरेको अनौठो बाध्यता थियो ।
मिलनले खोजखबर प्रसारणताकाका अनुभव सुनाउन वैशाख १५ गते नबोलाएको भए मैले साइकल सम्झिन्न थिएँ । साइकल नसम्झेको भए मैले ढाँटको कुरा अझै लुक्थ्यो । जुन कुरा खोजखबरका सञ्चालकहरूले कहिल्यै थाहा पाउन्नथे होला । साइकल किनिदिने दाजु भीमसेन राजवाहकले त अहिले बल्ल थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ ।
र, अन्त्यमा, मिलनलाई त्यो साइकल हराएको कथा भनिसकेपछि म जमल गएँ । जमलमा त्यो साइकल किनिएको थियो । त्यहाँ अहिले सातवटा साइकल पसल रहेछन् । मैले कुन पसलबाट साइकल किनेको थिएँ ठम्याउन सकिनँ । सडक फराकिलो पार्दा साइकल पसल साना भएछन् । जमलमा तिनै साइकल पसल आसपास एक छिन टहलिएँ । त्यो साइकलसँग जोडिएका कैयौं यादहरू ताजा भएर आए ।
आइकमको रिजल्ट हेर्न जमल गएको, उकालोमा साइकल चलाउन नसक्दा एक–दुईपटक बेहोस भएको, अगाडिको डन्डीमा साथीलाई राखेर कुदाएको आदि इत्यादि कुरा सम्झेर मुस्कुराएँ । सबभन्दा बढी भीमसेन दाइलाई सम्झिएँ । भीमसेन दाइ यो लेख पढ्नुभयो भने मलाई माफ गर्नुहोला । हराएको त्यो साइकलसम्बन्धी सत्य कुरा बोल्न मैले २१ वर्ष लगाएँ ।